Usoro ịzụ ahịa ekwentị mkpịsị aka na 2009 | Martech Zone
Ebumnuche Ahịa Mobile na-ebupụta na 2009
Sunday, Jenụwarị 4, 2009 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
The Summit Web 2.0 buru amụma Search Marketing na Mobile Marketing na-aga ịbụ nnukwu na 2009. Mụ kọfị na enyi m, Adam Small, na Satọdee na nke ya Mobile Marketing company ebe a na Indy enwewo nnukwu ọganihu - karịsịa na nkeji iri na ise gara aga. Imirikiti uto ya abụwo n'ihi ike API na mgbanwe o wuru gburugburu ya mobile ngwa ngwa.
Ihe ewu ewu nke ndị na-ajụ ase abụọ a bụ n'ihi ọnụ ahịa dị ala, mmetụta dị elu, mmetụta atụ atụ, yana ikike nke ndị ahịa iji jikọta ma mezie mkpọsa.
Mobile Mobile Gụnyere:
Izi ozi ederede na mata - n'ihi ikike ịpụ apụ na ikike ha, ekwenyere m na ahịa mkpanaka SMS na-aga iji nweta ike kachasị ike. Ndị mmadụ na-eji igwe ha ugbu a dị ka 'nzacha' maka mwakpo nke ozi ha na-enweta site na ndị ọzọ.
Ngwa ngwa ngwa - na iPhone, Blackberry Storm, na Google gam akporo igwe na-aga isi, ọ bụ nnukwu ohere iji wulite ngwa ma ọ bụ wijetị nke na-enye ndị ọrụ mkpanaka ohere iji ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ ngwanrọ gị na-emekọ ihe site na ekwentị. Ọ kwesịrị ịbụ a siri ike obere, ngwa… n'uche na interface na-agba nke ọma na a mobile nchọgharị nwere ike inwe ihe ị chọrọ!
Ahịa Bluetooth - Ahịa Bluetooth bu ahia ahia di nso, di nso. Ihu ọma, if onye ọrụ ejirila Bluetooth rụọ ọrụ ma ha na-ejegharị n'ime ọnọdụ gị, enwere ike izipu ọkwa na ekwentị. Ọ chọrọ nkwanye aka na ịbanye, mana ebe ọ bụ na onye na-azụ ahịa achọghị ịrịọ njikọ ahụ abụghị m onye ofufe.
Anaghị m gụnyere ozi olu n'ime ezinụlọ 'ire ahịa', mana ọ bara uru ileba anya na teknụzụ dị egwu dịka Vontoo. Na elu-tech cusp nwekwara ọrụ tinye n'ọrụ olu ude dị ka ọrụ oku nzụkọ Hey Otto!
Ekele Katie maka biputere ndị Ihe ngosi ekwentị Trendspotting na manyere m dee post a!
Tags: 2009ahịa efu
Mmetụta nke Social Media Marketing
Jenụwarị 5, 2009 na 12:55 PM
Na bluetooth marketing na-emetụ m ka ọ dị ntakịrị ntakịrị. M na-achọkarị ime ka m ghara inwe nkwarụ, ọ bụkwa n’ihi brọd Bluetooth nke ndị na-eme ihe ọjọọ na-anwa ịgbasa.
Jenụwarị 5, 2009 na 5:53 PM
Ọ bụ ihe na-akpali mmasị ịhụ ihe nwere ike ịbịa n'ọdịnihu nke azụmaahịa ekwentị. Ekwenyere m na gị na mgbasa ozi Bluetooth dị ka ihe na-enweghị isi, yana dịka onye kwuru okwu a kwuru, ụdị nke na-akpụ akpụ.
Na nyocha m na-ere ahịa na mkpanaka, achọtara m nke a na-enye aka gbasara ọdịiche dị n'etiti ahịa ahịa na mcommerce. http://lunchpail.knotice.com/2008/12/22/101-m-commerce-or-mobile-marketing/